PressReader - Ilanga langeSonto: 2019-01-06 - Umaskandi 'uchaphe ngenhlamba' abokhozi FM
Umaskandi 'uchaphe ngenhlamba' abokhozi FM
Uthi ucasulwe wukukhishwa kwengoma yomunye umaskandi kwebezizohlukanisa unyaka
Ilanga langeSonto - 2019-01-06 - Front Page - LUCKY CAIN NOZOWAKHA MBATHA
UGADLE waphindelela okhozini FM nakubasakazi balo, umculi kamaskandi ubukelani Khuzwayo odume ngodlubheke ( osesithombeni), ozalwa yinkunzi emidwayidwa emculweni kamaskandi ushobeni Khuzwayo.
Izolo kuvele imibiko yokuthi lo mculi ubhalele abasakazi bakasigiya Ngengoma, uzimiphi “Zimdollar” Biyela nomdonso Ngcobo, umqhafazo abagcine bewufunda emoyeni.
Lo myalezo ofundwe nguzimdollar egcizelela nokuthi uthunyelwe nguyena lo mculi, uthi: “Senikhathele ukuphusha lezi zinja zenu, senizodlala mina. Angisilo ivukane mina, aniphoqiwe, angidunyiswanga mina wukhozi, hlukanani nje nomculo wami.”
ILANGA Langesonto lithole ukuthi kunengxenyana ethize eyinhlamba abangayifundanga emoyeni laba basakazi, nephephandaba elingeke likwazi ukuyishicilela. Kwenzeka lokhu nje, bekungakapheli nengxenye yehora luqalile uhlelo emuva kokuba kulolu hlelo kudlalwe enye yezingoma zakhe.
Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule, lo mculi ubesanda kubhala enkundleni yokuxhumana, etshela abalandeli ukuthi useyaziqhelanisa nokhozi FM.
Kuthiwa ukwenze lokhu ngoba enengwa yisenzo salo msakazo sokuhoxisa ingoma kamzukulu esihloko sithi “Dali Wami”, ohlwini lwezingoma eziyishumi ebezibhekwe kwezingase zihlukanise unyaka.
Lowo myalezo abewubhalile ekuqaleni ubuthi: “Bathandi bomculo ngiyazi ukhozi FM luyigugu kinina kodwa kusuka ngojanuary ngizothatha isinqumo sokuba bangaphinde bathinte into eqondene nami ukuze nazi ukuthi noma umculo wami ningawuzwa okhozini ningaphatheki kabi. Vele mina igama lami ngiyalizabalazela, angidunyiswanga wukhozi FM nabasakazi balo ababolile.” (amanye amagama ahlelwe kabusha ukuze afundeke kahle)
Ngolwesihlanu udumisani Gasela, ozibize ngemenenja yalo mculi, ethintwa YILANGA Langesonto uqale wethuka ebuzwa ngalo mbhalo okuvela ukuthi ubhalwe kwi-whatsapp Status yalo mculi, kodwa wabe ususatshalaliswa kwi-facebook.
Uthe ngokwazi kwakhe, udlubheke akekho ezinkundleni zokuxhumana futhi akukho abake bakukhuluma naye mayelana nokungagculiseki kwakhe ngokhozi FM.
Ube esethembisa ukuxhumana nalo mculi ukuze abuyele entathelini esenokuphathekayo ngalo mbhalo oshiye iningi labantu limsola ngokuthi uphume eceleni, bekungafanele neze awubhale lo myalezo.
Ngokuhamba kwesikhathi, ugasela ubuyele entathelini, wavuma ukuthi udlubheke nguyena owubhalile.
“Uthi uwubhaliswe wukuhluthuka ngenxa yesenzo sokhozi FM sokubukela phansi umculo kamaskandi.
"Ubekhalela wonke umculi kamaskandi ngoba ohlwini lwezingoma ibingekho ekamaskandi, ebikhona ikhishiwe, kodwa akubange kusafakwa enye, kufakwe eyolunye uhlobo,” kuchaza ugasela.
Mayelana nombhalo othi lo msakazo ungabe usazithinta izinto ezisondelene naye, ugasela uthi lokhu ubekubhaliswa wukucasuka nje, basazimisele ukuqhubeka nokusebenza nokhozi FM, nokuphambene-ke nokwenziwe yilo mculi izolo.
Ugasela uqhube wathi: “Kungakuhle kodwa nokhozi FM lucacise kahle ukuthi yikuphi abakubhekayo ukuze ingoma ingene ohlwini lwezingoma ezizohlukanisa unyaka. Inkinga kasazi noma wukuthumela i- email eyodwa noma amaningi, kasazi kumele kwenziwe njani. Sidunguza ebumnyameni ngempela,” kukhala ugasela.
Esebuzwa ngokwenzeke izolo ugasela uthe basakhungathekile ngesenzo sabasakazi sokuvele bafunde into emoyeni bengazange bayiqinisekise ngoba lo myalezo ubungabhalwanga ngudlubheke.
“Sisazozama ukuxhumana nozandile Tembe (umphathi wezinhlelo okhozini) ngoba uzimdollar uthe bazowudlulisela kuye lo myalezo. Nabo o- producer sibona sengathi benze iphutha ngoba nathi le namba kadlubheke ike isihluphe, ivele izicishele nje singayiqondi ukuthi isebenza kanjani, kodwa bona bavele bakuthatha njengoba kunjalo obekubhaliwe.
"Engikuqinisekisayo kodwa wukuthi lo myalezo kawubhalwanga nguyena,” kusho yena.
Okhulumela ISABC, uneo Momodu, uthe ngeke baphawule ngalolu daba. [email protected]